शान्ति र संविधान निर्माणमा जिम्मेवार हुन दलहरुलाई राष्ट्रपति आग्रह
काठमाडौं, माघ १३ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मुलुकमा शान्ति र अमन चयन कायम गर्नका लागि समयमै संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अछामको बैद्यनाथमा आज
फेरि टुक्रियो सद्‍भावना
काठमाडौं, माघ १३ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्‍भावना पार्टी फेरि टुक्रिएको छ । पाँच सभासद् रहेको उक्त पार्टीका सभासद्द्वय गौरी महतो र रामनरेश
यस्तो छ सरकारको सुशासन कार्ययोजना
काठमाडौं, माघ १३ । सरकारले सुशासन र विकाससम्बन्धी दुई बेग्लाबेग्लै महत्वकांक्षी योजना बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरी शुसासन कार्ययोजना(२०६८ तथा
काठमाडौं, माघ १३ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिमा केही हेर फेर गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ८५, डिजल र मटि्टतेलमा प्रतिलिटर ३/३ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४
पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा जातीय राज्य हुँदैन : खनाल
नेपालगञ्ज, माघ १३। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले जातीय आधारमा मुलुकमा राज्य पुनसंरचना नहुने बताएका छन् । विहीवारदेखि बाँकेको कोहलपुरमा सुरु भएको पार्टीको भेरी अञ्चल स्तरिय कार्यकर्ता
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ : विजुक्छे
भक्तपुर, माघ १३ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले वार्तामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । वर्तमान सरकारले देश र जनतलाई फाइदाभन्दा पनि अहित हुने
Date : 25 Jan 2012
मन्त्री यादव राजीनामा पत्र बोकेर हिडेदै सिंहदरवार पुगे
कामाडौं, माघ ११। बिनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादवले बन्दको कुनै प्रभावह नगरी राजीनामा पत्र खल्तीमा नै बोकी पैदलै सिंहदरवार पुगेको छन् । सरकारी निवास पुल्चोकबाट कुपण्डोल, थापाथली, माइतीघर
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउने : युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठन
काठमाडौं,माघ ११। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध उपत्यका बन्द आयोजना गरेका युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनले आज दिसो ३ बजे देखि फिर्ता लिएको बतएको छ । यसपछिको आन्दोलन
बन्दले राजधानी लगायत मुलुकको विभिन्न भागको जनजीवन प्रभावित
काठमाडौं, माघ ११। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बिरोधमा आव्हान गरेको बन्दले राजधानी लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा जनजीवन प्रभावित बनेको छ । १३ विद्यार्थी र ९ युवा संगठनले संयुक्त
बन्दका कारण एमाले स्थायी समितिको बैठक स्थगित
काठमाडौं,माघ ११। आफ्नै पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनको समेत संलग्नतामा भएको उपत्यका बन्दका कारण आजका लागि बोलाइएको एमाले स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेको छ । आसन्न
एक बिजुली पसलको गोदाममा बिष्फोट हुँदा एक युवकको मृत्यु
पोखरा, माघ ११। पोखराको सभागृहचोकस्थित एक बिजुली पसलको गोदाममा बिष्फोट हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ । उक्त बिस्फोट क्रिष्टल लाइट हाउसको गोदाम कोठाको चापी खोलेर सामान
प्रधानमन्त्रीले तीनदलसगँ आज बस्ने भनेको बैठक स्थिगित, बैठक भालि बिहान ८ बजे बस्ने
काठमाडौं, माघ ११। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आहृवानमा बुधबार साँझ बस्ने भनिए को तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक स्थगित भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नयाँ निवास
नैतिकताका आधारमा यो सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने : पाण्डे
भरतपुर, माघ ११। प्रेस चौतारी नेपालले चितवनको भरतपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार पूर्ण रुपमा विफल भएको दावी गरेका छन् ।
तिनदलका शिर्ष नेताहरुको बैठक साँझ दाहाल निवासमा बस्दै
काठमाडौं, माघ ११। लगातार शिर्षदलका नेताहरुसँग भेटघाट तिब्र बनाएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आज साँझ तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई बैठकमा बोलाएका छन्। बैठक माओवादी अध्यक्ष दाहालको
ट्याक्टर दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु अन्य ५ घाइते
दाङ, माघ ११। दाङको लक्ष्मीपुर गाविसको भैसाहीमा लमहीबाट घोराहीतर्फ आउंदै गरेको ट्रयाक्टर दुर्घटना बाट सात जनाको मृत्यु भएको छ ।दुर्घटनामा परी तीनजनाको घटनास्थलमै र चारजनाको राप्ती
पाल्पाको तानसेनमा माओवादी राज्यस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शुरु
पाल्पा,माघ ११। एकीकृत नेकपा माआवादीको राज्यस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाल्पाको तानसेनमा शुरु भएको छ । मगरात तथा तमुवान राज्य समितिको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको माओबादी
पाल्पा बन्दको कारण जनजिवन प्रभावित
पाल्पा, माघ १०। पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिको बिरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले आह्वान गरेको बन्दका कारण पाल्पाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण पाल्पामा लामो तथा छोटो दुरीका कुनै
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे तीन दलका शीर्ष नेताहरुविच छलफल
काठमाडौं,माघ १०। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहोराटारमा सोमबार बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले शान्ति र संविधान पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बोध गरेको बताइएको छ
अबको वार्ता प्रधानमन्त्रीसँग : नेविसंघ उपाध्यक्ष नैनसिंह
काठमाडौं,माघ १०। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मुल्यवृद्धिविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्रीसँगमात्रै वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग वार्तामा बसेका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्रीसँगमात्रै वार्ता गर्ने निर्णय
शान्ति र संविधान निष्कर्षमा नपुगे मुलुक प्रतिगमनमा जाने : सिंह
काठमाडौं,माघ १०। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिहले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगे देशमा प्रतिगमनको खतरा हुने बताएकोछ । थपिएको समय भित्र पनि संविधान
सोनाम ल्होछार आज मनाईदै
काठमाडौं,माघ १०। देशभरका तामाङ समुदायले आज नयाँ वर्ष ल्होछार मनाउँदै छन् । उनीहरुको यो प्रमुख चाडको रुपमा लिदै आएको छ । आजदेखि ताक ल्होछार बाघ वर्ष समापन
डिआइजीले शव फाल्न प्रयोग गरेको सशस्त्र प्रहरीको गाडी नियन्त्रणमा
काठमडौं,माघ १०। सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्‍नी गीताको शव फाल्नको लागि प्रयोग गरेको गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले बा १ झ ६२१३
करेन्ट लागेर २ महिलाको मृत्यु
पर्वत, माघ १०। पर्वतको देउराली गाबिसमा जलेर दुई महिलाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन । जलेर देउराली गाविस वडा
सभासद् श्यामसुन्दर गुप्तालाई थप दश दिन थुनामा राख्न आदेश
काठमाडौं,माघ ९। ब्यापारी पवन संघाई अपहरण काण्डमा पक्राउ परेका सभासद् श्यामसुन्दर गुप्तालाई थप दश दिन थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । भैरहवास्थित आफ्नै निवासबाट
सभासद श्यामसुन्दर गुप्ताको सहयोगी आरजु सुब्बा नगद ३५ लाख रुपैयाँ सहित आज पक्राउ
काठमाडौं,माघ ९। व्यापारी पवन संघाइलाई अपहरण काण्डमा मुख्य योजनाकार पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताकी निकट सहयोगी आरजु सुब्बालाई ३५ लाख रुपैयाँ सहित प्रहरीले सुब्बालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र कांग्रेस सभापति कोईरालाबिच भेटवार्ता
काठमाडौं,माघ ९। बिहानै कोइराला निवास महाराजगञ्ज पुगेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासगँ भेटवार्ता भएको छ । वार्तामा प्रधानमन्त्रीले गतिरोध फुकाउन सहयोग गर्न आग्रह
मुल्यवृद्धीका कारण तीन दिन राजधानीमा अकल्पनीए तनाव भोग्नु परेको छ : ट्राफिक प्रमुख राई
कामठमाडौं, माघ ९। विद्यार्थीको महँगीविरोधी चक्काजामका कारण ट्राफिक प्रहरीले गएका तीन दिन राजधानीमा अकल्पनीए तनाव भोग्नु परेको छ । यसमा लाखें जनताले पनि सास्ती भोग्नु
मन्त्रीको उपस्थित नभएपछि संसद बैठक एक घण्टा स्थगित
काठमाडौं,माघ ९। कुनैपनि मन्त्रीको उपस्थित नभएपछि आइतबारको संसद बैठक झण्डै एक घण्टा स्थगित भएको थियो। संसदको बैठक सुरु हुँदै एक जना पनि मन्त्री उपस्थित
मुल्यबृद्धिको बिरोधमा विद्यार्थीसंगठनद्धारा आज रुपन्देही बन्द
रुपन्देही, माघ९। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यबृद्धिको बिरोध गर्दै विद्यार्थीसंगठनहरुले आज रुपन्देही जिल्ला बन्द गराएका छन् । बन्दका कारण भैरहवा, बुटवल, नवलपरासी, पाल्पा लयायताका स्थानहरु समेत प्रभावित
ट्रकको ठक्करबाट ६ जनको मृत्यु
सुनसरी, माघ ९। सुनसरीको पकलीमा मालबाहक ट्रकको ठक्करबाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ । पकली चोकमा काठमाडौं जान बस कुरिरहेका बेला ना ४ ख ७९६ नम्बरको ट्रकले
Pages 132 : You are at page 88 of 132